Seafood မီနူးတွေအဓိကရတဲ့ Seafood Paragon မှာ မီနူးအသစ်တွေရနေပြီဗျို့…..
ပင်လယ်စာတွေချည်းသီးသန့်ရောင်းတဲ့ Seafood Paragon ကိုမှတ်မိကြလားဟင် ! အက်မင်ကတော့ ပင်လယ်စာတွေဆိုအသေကြိုက်တော့ဒီဆိုင်ရဲ့ Page လေး...
601 Views 1 year ago
ဟော့ပေါ့ကို အသားနှပ်တွေနဲ့စားမယ်၊ Set Menu, Ala Cert တွေနဲ့ တန်အောင်စားလို့ရမယ့် Secret Garden ထဲက ‘Jo Jo Hot Pot’
Secret Garden ထဲမှာဖွင့်ထားလို့ ဈေးကြီးမယ်တော့ မထင်ကြနဲ့နော် :P မယုံမရှိနဲ့ အောက်မှာသာဖတ်ကြည့်ကြတော့ :P :P
986 Views 1 year ago
ပါရမီစိန်ဂေဟာနားမှာ ‘Bombay Delight’ ဆိုတဲ့ချစ်တီးထမင်းဆိုင်အသစ်ဖွင့်ထားတယ်ဝေး….
လူမျိုးဘာသာမရွေးစားသုံးနိုင်တဲ့ ချစ်တီးထမင်းဆိုင်လေးက လှိုင်မြို့နယ်၊ ပါရမီစိန်ဂေဟာအနီးတဝိုက်မှာ အသစ်ဖွင့်ထားပါတယ်။ ချစ်တီးထမင်...
1145 Views 1 year ago
ပင်လယ်စာကိုမှ တိုင်းရင်းသားရိုးရာပုံစံလေးတွေအတိုင်း ခံစားရစေမယ့် ‘ရွှေကြာနီ’
သင်္ကြန်တစ်တွင်းလုံးစားသောက်ဆိုင်တွေကလည်းအစုံမဖွင့်တော့ စားချင်တာမစားရတာတောင် တော်တော်ကြာခဲ့ပြီ…. စမ်းချောင်း၊ ကျောင်းကုန်...
464 Views 1 year ago
မနက်ဖြန်သောကြာနေ့ TGIF မှာ ဘယ်သွားရကောင်းမလဲစဉ်းစားနေကြတဲ့သူတွေအတွက်
မြို့ပြရဲ့ ဆူညံပွက်လောရိုက်မှုတွေ ၊ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ကားတွေနဲ့ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဘော်ဒါတို့အတွက်...
ပူပူစပ်စပ်ဟင်းရည်လေးနဲ့ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ 78 Hot Pot
အခုနောက်ပိုင်း ဟော့ပေါ့ဆိုင်တွေပိုများလာတယ်နော်… ကိုယ်လည်း ဟော့ပေါ့ခရေဇီဆိုတော့ ဆိုင်တွေတော် တော်များများကို လိုက်စားမိတ...
စမ်းချောင်းက Central Hot pot ဆိုရင်တော့ မသိသူမရှိကြဖူးထင်တယ်နော်… ဆိုင်ဖွင့်ခါစက 50% လောက်ထိ Discount ချပေးပြီး လူတွေလည်...
မြေနီကုန်း၊ မြေနုလမ်းထဲက မာလရှမ်းကော၊ မာလာငါးနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းတရုတ်ဟင်းပွဲလေးတွေရတဲ့ ‘ရွှေပြည့်’
မြေနီကုန်းအနီးတဝိုက်ဘာစားရမလဲဆိုတာ ဆိုင်တွေကပေါသလိုလိုနဲ့ တကယ့်တကယ်စားမယ်ဆို သိပ်စဉ်းစားမရတော့ဖူး။ ဘာစားလို့ဘာစားရမှန်းမသိ၊ ကို...
ဟိုးတလောကရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ST Café မှာ နောက်ထပ်ဘာတွေထူးခြားနေပြီလည်း သိချင်နေကြတဲ့သူတွေများ ရှိနေမလားနော်…!!
ST Café ဆိုရင်တော့ဘာဆိုင်လေးလည်းဆိုတာ တန်းသိကြမှာပဲနော်… တစ်ဆိုင်လုံး Doraemon အရုပ် တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီး Food M...
1103 Views 1 year ago
ထိုင်းအစားအစာကိုမှကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကိုမမတွေအတွက် တောင်ဥက္ကလာက ‘မြနန္ဒာ’
အခုနောက်ပိုင်း စားသောက်ဆိုင်အသစ်တွေ ထပ်ထပ်ပြီးဖွင့်လာကြတယ်။ ကိုယ်တွေတောင် လိုက်စားလို့ မနိုင်လောက်အောင်ပဲ။ ဟိုနေရာဆိုင်အသစ်ဖွင်...